Ozi dị na ibe agba a na-agụnye nkọwa nke nkọwapụta nkọwapụta zuru oke na nhazi usoro, yana nkọwa nke ọkọlọtọ na nhọrọ nhazi, na anyị anaghị enye ikike na a ga-etinye nhazi nhọrọ na onyinye ngwaahịa ọ bụla;
Wepu ihe nlele 8 n'otu oge, oge kachasị ọsọ bụ nkeji iri.
Kachasị njupụta na ugboro mwube na ụlọ okpomọkụ lysis wepụ ekwe omume nke aerosol mmịpụta.
Nchekwa na kwesiri ntukwasi obi
Wuru ULTRAVIOLET oriọna na-ewepu nje nucleic acid nwere ike ime. Akpaaka, ọrụ emechiri emechi, na ihe ndị nwere ike iwepu, belata oke ihe egwu nke ihe ndị na-eme ka kemịkal na nje na-akpata nsogbu nye onye ọrụ ahụ.
Mfe ka rụọ ọrụ
Wuru na-template usoro, otu-pịa mmalite, oru oma na-adaba adaba.
Mini Automatic nucleic acid wepụ
Zọ mmanya ndọta Olu olu 20 ~ 200 μL
Number nke magnet mmanya 8 Ihe nlele 1 ~ 8
Magnetik chaplet mgbake 95% Ndị na-eri ihe
8 - ahihia magnetik, oghere 96 oghere di omimi kit Magnetic bead nucleic acid extraction kit
10 mbipụta / mL ọgbaghara dị n'etiti CV ≤ 5%
Njikwa okpomọkụ RT ~ 99 ℃ ， ± 1 ℃
15 ~ 30 nkeji / oge
Njikwa mmetọ Mgbakasị ahụ UV
Atọ atọ iji gbanwee
Ọrụ interface Ma na China na Bekee, ihuenyo anụ ọhịa dị 7 nke anụ ọhịa, otu pịa ịmalite Njikwa mmemme Nkọwapụta nnwere onwe nnwere onwe, nwere ike ịchekwa usoro omenala 999
AC 110 ~ 240 V ， 50 Hz ， 60 W Gburugburu ebe ọrụ 10 ~ 40 ℃, ＜ 80% RH
Akụkụ (L * W * H) 250 mm * 200 mm * 205 mm Akụrụngwa net arọ 5.0 N'arọ
Nchikota atụmatụ PortLab-3000 （CHK-800 ， UF-300）
Ozi dị na ibe agba a na-agụnye nkọwa nke nkọwapụta nkọwapụta zuru oke na nhazi usoro, yana nkọwa nke ọkọlọtọ na nhọrọ nhazi, na anyị anaghị enye ikike na a ga-etinye nhazi nhọrọ na onyinye ngwaahịa ọ bụla; Ahụike Longline nwere ikike ịgbanwe nkọwa ngwaahịa na / ma ọ bụ ịkwụsị mmepụta nke ngwaahịa ọ bụla n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọkwa ọ gaghị akwụ ụgwọ maka nsonaazụ ọ bụla sitere na iji mpempe akwụkwọ agba a. Biko rụtụ aka na ntụziaka maka contraindications ma ọ bụ ịkpachapụ anya.
Nke gara aga: CHK-16A Automatic Nucleic Acid Mmịpụta Sistemụ
Osote: MA-688 ezigbo oge PCR System